ATN: လမ်းဆုံးရောက်သွားသူများ (၂)
ငှက်ဖျားကတော့ ကျမ လဲ မသေလို့ ဒီနေ့ရှိနေခဲ့တယ်လို့ တောင်ပြောလို့ ရတာပါ
၂ကြိမ်လောက်ထိ သတိလစ်ပြီး သေမဲ့အဆင့်ရောက်ခဲ့ လို့ ကိုယ်ချင်းစာ နိုင်တယ်..
လမ်းဆုံးရောက်သွား သူများ က ပြီးပြီလား..
ဖတ်ရတာ..တော့... ရေးချင်ခဲ့တာ နဲ့ ရေးဖြစ်တာက
နဲနဲ များ လွဲနေသလား လို့...
သူရဲကောင်း ၃ ယောက် ကိုလဲ ဂုဏ်ပြုသွား ပါတယ
အစ်ကို တိုက်ပွဲမှာကျဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့် လှော်ရင်း တက်ကျိုးသွားရတဲ့ လူငယ်တွေဟာလည်း သူရဲကောင်းတွေပါပဲ။ တကယ်လို့သာ ဒီတိုက်ပွဲကို တိုက်စရာမလိုရင် ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံခဲ့ရမှာလား။
စိတ်မကောင်းစွာ နားလည်စွာ ဖတ်သွားတယ်အစ်ကို...
အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း သေဆုံးသွားတဲ့ သူတို့အတွက် သေခြင်းကမြတ်တယ်လို့ပြောရင် တန်ပါ့မလား အသက်တစ်ချောင်း ဒီလောက်လွယ်လွယ်လေး ကျိုးပြတ်ရတာတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ ။
ရေတိမ်နစ်ခဲ့တဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်များခဲ့ပြီလဲ...? ဘယ် လောက်များများရော ဆက်ပြီးရေတိမ်နစ်ဖို့ ရှိနေကြသေး လဲ....? ဘာကြောင့်လဲ...? ဘာအတွက်လဲ...? ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..? ဘယ်တော့လဲ....? လဲ...လဲ..လဲ..လဲ...
ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲ ရောက်နေရမဲ့ အရွယ်တွေ တောထဲ တောင်ထဲ ရောက်နေရတယ်ဆိုကတည်းက သူတို့ စွန့်လွှတ်မှုကို လေးစား အသိအမှတ်ပြုရမှာပါ။
အကို့ မှတ်တမ်းကို စိတ်မကောင်းစွာ ဖတ်သွားပါတယ်။
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းပေမယ့် လေးစား ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ အကိုရာ။ သူတို့တွေကို ဂုဏ်ယူမိတယ်
လမ်းဆုံးဆိုတာ လူတိုင်း နိစ္စဓူဝ ဦးတည်ပြီးလျှောက်နေ ကြရတာပါပဲ၊ မသေခင်သာ ကောင်းတဲ့ မှတ်ကျောက် တင်နိုင်အောင် ပြုမူနေထိုင်ကြရတာ မဟုတ်ပါလား? .. ကိုအောင်...ဘာပဲပြောပြော နိုင်ငံ ချစ်၍ မိမိကိုယ်ကို စွန့်လွှတ်သူတွေကိုတော့ လေးစားပါတယ်။
ထားပါတော့ L.A မှာ အဆင်ပြေပြီလား? အကို....?
မမ၊ မေ့သမီး၊ ညီ လင်းဒီပ၊ တူမောင်မျိုး၊ ညီငယ် အိပ်မက်နက်၊ ညီမ ချိုသင်း၊ နေညိုရင့်၊ သက်ပိုင်သူ၊ ဒူကဘာ လာရောက် အားပေး ဖတ်ရှုကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော။
ကျွန်မတို့ တပ်ရင်းမှာတော့ ငှက်ဖျားက လူတိုင်း ဖြစ်ပေမယ့် ငှက်ဖျားဖြစ်တဲ့သူတိုင်း ဆေးရုံမှာပဲ Quinine Sulphate ကို Course ပြတ်အောင် ဆေးမှူးတွေကိုယ်တိုင် ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် တိုက်တာကို သောက်ပြီးမှ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းရလို့ ငှက်ဖျားနဲ့ ဆုံးတာသိပ်မရှိဘူး။ မှတ်မိသလောက် တယောက်ပဲ ရှိတယ် ဒီတယောက်တောင်မှ ငှက်ဖျားဖြစ်ပြီး ငှက်ဖျားပိုးကြာင့်ဆုံးတာ မဟုတ်ဘူး အသည်းရောင် အသားဝါလည်းရှိတယ်၊ ပြီးတော့ Haemoglobin ( သွေးနီဥပါဝင်တဲ့ဓါတ်) တော်တော်နည်းသွားတာ သိတဲ့အချိန်မှာ သွေးသွင်းဖို့ အချိန်မမီလိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ ကိုအောင်သာငယ် ဘလော့ဂ်ကို ၀င်လာတိုင်း အင်တာနက်ပြုတ်ကျလို့ နောက်ပိုင်း သိပ်မလာဖြစ်ခဲ့ဘူး။